Mogadishu Journal » Maxkamadda ciidamada Qalabka Sida oo xukun riday
Maxkamadda ciidamada Qalabka Sida oo xukun riday
Mjournal :-Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa saakay xukun min 5 sano oo xabsi ciidan ah waxa ay ku riday 18 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Cidamadan xukunka lagu riday ayaa si gaar ah uga tirsanaa guutada 14-ka October, oo la aas aasay qaraxii Zoobe kadib, iyaga oo ka jawaabayay baaqii Madaxweynaha ee ahaa in loo baahan yahay dhalinyaro aqoonyahano ah oo dalkooda difaaca.
Xafiiska xeer ilaalinta ayaa raggan ku soo eedeeyay inay qalqal ka dhex abuureen Guutada dhexdeeda, la safasho qabiil iyo arrimo kale, waxaana ugu dambeyn maanta lagu riday xukun xabsi ciidan ah.
Gaashaanle Dhexe Xasan C/raxmaan Aadan (Wabiyow) oo ka tirsan saraakiisha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa sheegay ciidankan inay qirteen dambigii lagu soo eedeeyay, kadibna xukunka sidaas uu ugu dhacay.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa qaada kiisaska la xiriira ciidamada dambiyada galay, ragga ku eedeysan Shabaab iyo waliba dadka kale ee dilalka geysta.
Maxkamad ku taalla Turkiga oo diiday sii deynta nin Mareykan ah